Indie Arena Booth paGamescom: Mazuva mana eMitambo yeIndie - Game Point - Mitambo yeBhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Aug 25, 2021 | Gamescom muCologne, nhau, Vhidhiyo mitambo
Chiitiko cheIndie chakakurumbira cheGamescom chinovhura magonhi ayo nhasi: Pamwe chete neGamescom, iyo Indie Arena Booth yakagadzirira zvakawanda zvemukati kuisa mitambo ye279 munzvimbo inotariswa.
Kubva China masikati kusvika Svondo pachave nechirongwa chemazuva ese chemazuva ese: Pfuti yekutanga ichapihwa neChina na16 pm ne "Welcome to". Mushure mezvo, tarisiro ichave pamitambo yakasiyana-siyana yeindie nevagadziri vayo kusvika kuma22 p.m. Uye: Nyaya dzemagariro kubva munyika yemitambo dzinogadziriswawo. Pachave nerukova pa "Diversity in Gaming" neChina kubva na21 p.m.
Indie mitambo iri pamberi
"Kupenga kwese kwakapoteredza chiitiko kunoita kuti nditarisire kwazviri," anodaro Valentina Birke, Musoro weIAB, anotungamira chiitiko ichi. "Takatora zvikamu zvese zvakanakisa zveIAB yegore rapfuura uye takavakira pazviri kuita kuti gore rino riwedzere kunakidza, kunzwisisika, uye kuve nani. Handisi kumirira kuti vatambi vaongorore chiitiko ichi. "
Vatambi vanogona kunyura muiyo chaiyo fair zvakadzika zvakanyanya kupfuura nakare kose. Kwete chete iwe unogona kusangana neshamwari dzako mune yakanaka MMO, asi iwe unogona zvakare kupindirana nevagadziri vemitambo yeindie uye kushamisika nedhizaini nyowani.
Iyo indie yakanakisa yedigital Gamescom:
Musasa weZhizha weDoom ndeyechokwadi yekutengesa fair MMO ine zana nemakumi maviri akasarudzwa indies uye Arcade Village. Iyo musasa yakavhurwa kubva Nyamavhuvhu 120 kusvika 25.
Indie Arena Booth pfura Zviitiko naShay Thompson naAndrea Rene, neNgatitambe uye Mubairo Show kubva Nyamavhuvhu 25 kusvika 29, zuva nezuva kubva 15:30 p.m.
Kutengesa & Demo Zviitiko chiutsi uye Gogi, ine mazita ese kubva kuIndie Arena Booth uye akawanda ega ega mademo.
gamescom: Awesome Indies inouya yakananga kubva kuVenice Beach inoyevedza uye inopa anopfuura makumi mana emitambo yakasiyana.
gamescom EPIX inopa mibairo yakasarudzika, inotsigirwa nevanosvika makumi matatu.
Shay Thompson anga atove mumwe wevatambi vechiitiko ichi gore rapfuura uye ari kufara kuvapo zvakare: “Indie Arena Booth ndiyo ichave hotspot. Kune matrailer, kubvunzurudza uye maonero akasarudzika munyika yemitambo yeindie. Ndakakomborerwa zvikuru kuita chiitiko ichi gore rapfuura uye ndinofara zvikuru kudzoka gore rino. "
Kare The Lord of the Rings: Rise to War mobile game ichaburitswa kudonha uku
Inotevera Mitambo yakabatsirwa kuburikidza neCorona: Gamescom "inopenya muenzaniso"
Mhuka Kuyambuka: New Horizons matipi uye matipi - vanotanga vanofanirwa kuziva
EU-inotsigirwa chakavanzika vhidhiyo mutambo Draugen ichaburitswa muna Chivabvu 29 yePC
Playstation 5 uye Xbox Series X: HDMI 2.1 inofanirwa?